Wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Galmudug oo dib ugu laabtay Cadaado+Sawirro – Radio Muqdisho
Wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Galmudug oo dib ugu laabtay Cadaado+Sawirro
Wafdi uu hogaaminayay madaxwaynaha dawlad goboleedka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayna qayb ka ahaayeen Gudoomiyaha Baarlamanka Galmudug Cali Gacal Casir, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado.
Wafdiga oo ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho waxaa garoonka diyaaradaha Cadaado ku soo dhaweeyay madaxwayne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo mas’uuliyiin kale.
Gudoomiyaha Baarlamanka Galmudug Cali Gacal Casir oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in wafdigiisa oo qaar ka mid ah wadamada Yurub soo maray ay maalmihii la soo dhaafay ku sugnaayeen magaalada Muqadisho, ayna la kulmeen mas’uuliyiin kala duwan.
Imaanshaha madaxda Galmudug ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan lagu wadaa in magaalada Cadaado uu ka furmo kalfadhiga 2-aad ee golaha Baarlamanka Galmudug.
Wasiirka Difaaca oo kulan la qaatay Safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya “SAWIRRO”
Madaxweynaha Puntland oo galabta soo xiray shirkii la xisaabtanka hay’adaha+Sawirro
Madaxweynaha Puntland oo galabta soo xiray shirkii la xisaabtanka hay'adaha+Sawirro